ကိုကင်းသည်အရွယ်ရောက်သည့်ကြွက်များထက် Periadolescent ပိုတက်ကြွမှုကိုပိုမိုတိုးပွားစေသည့် Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်သည် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ကိုကင်းအရွယ်ရောက်သည်အထိ (2008) ထက် Periadolescent ပိုမိုစိတ်ကြွဆေး Dopamine ဖြန့်ချိတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
Neurotoxicol Teratol ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2009 စက်တင်ဘာလ 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
: နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ပုံစံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ Published
Neurotoxicol Teratol ။ 2008; 30(5): 412-418 ။
2008 ဧပြီလ 22 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.ntt.2008.04.002
မည်သို့ဒါဝိဒ်သည် Walker က, Ph.D ဘွဲ့ကို နှင့် စင်သီယာအမ် Kuhn, Ph.D ဘွဲ့ကို
စာရေးသူသတင်းအချက်အလက်များ ► မူပိုင်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်သတင်းအချက်အလက်များ ►
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Neurotoxicol Teratol
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုစတင်များအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်တာဝန်ရှိသည်အဆိုပါအာရုံကြောယန္တရားများမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ dopamine neurotransmission အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုဟာ periadolescent ကြွက်များတွင်ကင်းရဲ့တိုးမြှင် psychomotor သက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ လျှပ်စစ်ဆွထုံဆေး Post-Natal အသက်အရွယ် 28 ကာလ၏ medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး (PN28) နှင့် PN65 ကြွက် caudate နျူကလိယနှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ရူးနှမ်း 15 PN65 caudate အောက်ပါထက် PN28 အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြ / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း ip Extracellular dopamine ပြင်းအား MG မီနှင့်အပြီး core ကို accumbens 20 နှင့် 60Hz စိတ်ကြွဆေးနှင့် 65Hz စိတ်ကြွဆေးအောက်ပါ PN60 နျူကလိယ accumbens ၌တည်၏။ ကိုကင်း periadolescent caudate အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် 20 Hz စိတ်ကြွဆေး 3-ခွံအားဖြင့်ရူးနှမ်း dopamine ပြင်းအား, ဒါပေမယ့်နီးပါး 9-ခြံတိုးတက်လာခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း dopamine ရှင်းလင်းရေးလူကြီးများနှင့်ဆင်တူခဲ့ပေမယ့် Dopamine လွှတ်ပေးရန်နှုန်း periadolescent caudate အတွက်အနိမ့်ခဲ့သည်။ တစ်နိမ့် V ကိုများအတွက်လျော်ကြေးပေးအပ်နေဖြင့်ရှင်းလင်းရေး၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်အဆိုပါ periadolescent caudatemax ကို ပိုမိုမြင့်မားလွန်ကဲဆှဖှေဲ့အတူ။ periadolescents အတွက်ပိုမိုမြင့်မားလွန်ကဲ / လွှတ်ပေးရန်အချိုးအစားအားဖြင့် extracellular dopamine ၏တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုကင်းပြီးနောက် သာ. ကွီးမွတျတိုးမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ နျူကလိယ accumbens, dopamine လွှတ်ပေးရေးနဲ့ V မှာတော့max ကို လူကြီးများထက် periadolescents အတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြပေမယ့်လွန်ကဲဆှဖှေဲ့နှင့်ကိုကင်းသက်ရောက်မှုအလားတူခဲ့ကြသည်။ dorsal striatum အတွက် dopamine neurotransmission ၏နုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် psychostimulants မှတိုးမြှင့်စူးရှသောတုံ့ပြန်မှုများကိုအခြေခံနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှဆယ်ကျော်သက်လူသား သာ. အားနည်းချက်တစ်ခုယန္တရားအကြံပြုလိမ့်မည်။
keywords: ဖွံ့ဖြိုးရေး, စွဲလမ်း, voltammetry, dopamine neurotransmission, ကင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်
လှုံ့ဆော်မှုသွေးခုန်နှုန်းနှုန်းဖြန့်ချိ dopamine ၏အာရုံစူးစိုက်မှု
အကျယ်ချဲ့ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု evoked
1. Adriani W က, Chiarotti က F, Laviola G. အဓာတ်လှေကားအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ periadolescent ကြွက်များတွင်ပိုင်ထိုက်သောဃ-စိတ်ကြွဆေးာင်း။ Behav.Neurosci ။ 1998;112: 1152-1166 ။ [PubMed]
2. Andersen က SL, Gazzara RA ။ neostriatal dopamine လွှတ်ပေးရေး apomorphine-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ ontogeny: အလိုအလျောက်လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ J.Neurochem ။ 1993;61: 2247-2255 ။ [PubMed]
3. Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, Krenzel အီး, Teicher MH ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002;27: 683-691 ။ [PubMed]
4. Belluzzi JD, Lee က AG က, Oliff HS, Leslie FM ရေ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုပေါ်နီကိုတင်း၏အသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004;174: 389-395 ။ [PubMed]
5. Belluzzi JD, ဝမ် RH အ, Leslie FM ရေ။ Acetaldehyde ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 705-712 ။ [PubMed]
6. Bergstrom ကို BP, Garris PA ဆိုပြီး။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ကြိုတင်လက်ခဏာအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သည့်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်ကို ဖြတ်၍ striatal extracellular dopamine ၏ 'passive stabilization' - ၆-OHDA - ကြွက်များကို voltammetric လေ့လာမှု။ J.Neurochem ။ 2003;87: 1224-1236 ။ [PubMed]
7. Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: အလားတူနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J.Neurosci ။ 2004;24: 1793-1802 ။ [PubMed]
8. Bolanos, CA, periadolescent ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ dopaminergic မှ Glatt SJ, ဂျက်ဆင်ဃ Subsensitivity: တစ်အပြုအမူနှင့် neurochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Res Dev.Brain Res ။ 1998;111: 25-33 ။ [PubMed]
9. Cahill PS, Walker က QD, Finnegan JM, Mickelson GE, Travis ER, Wightman RM ။ ဇီဝစနစ်များအတွက် catecholamines ၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက် Microelectrodes ။ Anal.Chem ။ 1996;68: 3180-3186 ။ [PubMed]
10 ။ Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးကင်းဖို့ Enhanced အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;183: 218-225 ။ [PubMed]
11 ။ Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးကင်းဖို့ Enhanced အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology ။ 2005;183: 218-225 ။ [PubMed]
12 ။ Catlow BJ, Kirstein CL ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုကြီးထွား။ J.Psychopharmacol ။ 2005;19: 443-447 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်တစ်ခုအရေးပါကာလ။ Am.J.Psychiatry ။ 2003;160: 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ ချန် K ကို Kandel DB, ဒေးဗီးစ်အမ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအကြိမ်ရေနှင့်အရေအတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားပြီးခဲ့သည့်နှစ်က proxy ကိုမှီခိုအကြား။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1997;46: 53-67 ။ [PubMed]
15 ။ Clark က DB, Kirisci L ကို, Tarter RE ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစတင်ခြင်းနှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998;49: 115-121 ။ [PubMed]
16 ။ Collins SL, Izenwasser အက်စ်နာတာရှည်နီကိုတင်း differential ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။ Neuropharmacology ။ 2004;46: 349-362 ။ [PubMed]
17 ။ Costall B, Naylor RJ ။ dopamine အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ hyperactivity ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှပုံမှန် neuroleptic အေးဂျင့်များနှင့် thioridazine, clozapine, sulpiride နှင့် metoclopramide ၏စွမ်းရည်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ extrapyramidal ၏ဒေသများနှင့် mesolimbic စနစ်များကိုမှ intracerebrally လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ Eur.J.Pharmacol ။ 1976;40: 9-19 ။ [PubMed]
18 ။ Creese ငါ Iverson SD က။ 6-hydroxydopamine နှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးများကုသမှုအောက်ပါအရွယ်ရောက်သူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးသွေးဆောင်မော်တာဆွနှင့် stereotypy ၏ပိတ်ဆို့။ ဦးနှောက် Res ။ 1973;55: 369-382 ။ [PubMed]
19 ။ Cunningham MG, Bhattacharyya S ကိုစေလွှတ် FM ရေ။ Amygdalo-cortical ပေါက်အစောပိုင်းလူကြီးသို့ဆက်လက်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော function ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J.Comp.Neurol ။ 2002;453: 116-130 ။ [PubMed]
20 ။ Estroff TW, Schwartz RH, Hoffmann NG ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားမှု - စွဲလမ်းစေသောအလားအလာ၊ အပြုအမူနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ လက်တွေ့ကလေးအထူးကု။ 1989;28: 550-555 ။ [PubMed]
21 ။ Everitt BJ, Dickinson တစ်ဦးက, Robbins TW ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2001;36: 129-138 ။ [PubMed]
22 ။ Frantz KJ, O'Dell LE, Parsons LH ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 625-637 ။ [PubMed]
23 ။ Garry PA ဆိုပြီး, Walker က QD, Wightman RM ။ Dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှနှုန်းထားများ dopamine ဆိပ်ကမ်း၏ဆုံးရှုံးမှုအချိုးအစားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း denervated striatum အတွက်နှစ်ဦးစလုံးလျော့ကျ။ ဦးနှောက် Res ။ 1997;753: 225-234 ။ [PubMed]
24 ။ Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, pause T က, အီဗန်, AC, Rapoport JL ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရား neuroscience ။ 1999;2: 861-863 ။ [PubMed]
25 ။ Haycock W က, Becker က L ကို, အန်း L ကို, Furukawa Y ကို, Hornykiewicz အိုကိရှ SJ ။ dopamine အတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများနှင့်လူ့ striatum အခြား presynaptic dopaminergic အမှတ်အသားများအကြားကွာဟမှုမှတ်သား။ J.Neurochem ။ 2003;87: 574-585 ။ [PubMed]
26 ။ Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2006;29: 565-598 ။ [PubMed]
27 ။ Ito က R ကို, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလိယအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကျော် differential ထိန်းချုပ်မှု core နဲ့ shell ကို accumbens ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004;7: 389-397 ။ [PubMed]
28 ။ ဂျုံးစ် SR, Garry PA ဆိုပြီး, Wightman RM ။ အဆိုပါ caudate-putamen နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှာမှအပေါ်ကိုကင်းနှင့်အ nomifensine ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J.Pharmacol.Exp.Ther ။ 1995;274: 396-403 ။ [PubMed]
29 ။ Kantak KM, Goodrich CM, ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်လိင်, estrous သံသရာနှင့်မူးယစ်ဆေး-စတင်ခြင်းအသက် Uribe V. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Rattus norvegicus) Exp.Clin.Psychopharmacol ။ 2007;15: 37-47 ။ [PubMed]
30 ။ Kelley AE၊ Schochet T၊ Landry CF. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစွန့်စားမှုယူခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း - အပိုင်း ၁ နှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: အားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများ။ 2004;1021: 27-32 ။ [PubMed]
31 ။ ကယ်လီ PH သည်။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်မော်တာအပြုအမူ။ ခုနှစ်တွင်: Iverson ll, Iversen SD, Snyder SH, အယ်ဒီတာများ။ Psychopharmacology အတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1977 ။ စစ။ 295-332 ။
32 ။ ကယ်လီ PH သည်, Seviour PW, Iverson SD က။ ယင်းနျူကလိယ၏ 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကြွက်များတွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့် apomorphine တုံ့ပြန်မှု septi နှင့် Corpus striatum accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 1975;94: 507-522 ။ [PubMed]
33 ။ Kerstetter Ka, Kantak KM ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2007;194: 403-411 ။ [PubMed]
34 ။ Lanier LP သို့ Isaacson RL ။ အဆိုပါ locomotor စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်နှင့် hippocampal function ကို၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1977;126: 567-575 ။ [PubMed]
35 ။ Laviola, G, Dellomo, G, Alleva အီး, ကင်း Hyperactivity ၏ Bignami G. အ Ontogeny နှင့်ကြွက်တွေအတွက် conditional နေရာဦးစားပေး။ Psychopharmacology ။ 1992;107: 221-228 ။ [PubMed]
36 ။ Laviola, G, Pascucci T က, Pieretti အက်စ် Striatal dopamine ာင်း periadolescent D-စိတ်ကြွဆေးမှမဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များဖြစ်သည်။ Pharmacol.Biochem.Behav ။ 2001;68: 115-124 ။ [PubMed]
37 ။ Le Moal M၊ Simon H. Mesocorticolimbic Dopaminergic ကွန်ယက် - လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေများ။ ဇီဝကမ္မပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1991;71: 155-234 ။ [PubMed]
38 ။ Leslie FM၊ Loughlin SE, Wang RH, Perez L, Lotfipour S, Belluzzi JD ။ forebrain stimulant တုန့်ပြန်မှု၏မြီးကောင်ပေါက်ဖွံ့ဖြိုးမှု - တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: အားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများ။ 2004;1021: 148-159 ။ [PubMed]
39 ။ Lew R ကို, Patel ကတစ်ဦး, Vaughan RA, Wilson ကတစ်ဦး, Kuhar MJ ။ Rat Striatum နှင့်နျူကလိယ-Accumbens အတွက် Dopamine ပို့ဆောင်ရေး Microheterogeneity ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992;584: 266-271 ။ [PubMed]
40 ။ လီ LB, Chen က N ကို, Ramamoorthy S ကို Chi L ကို, Cui XN, ဝမ် LC, Reith ME ။ လူ့ dopamine ပို့ဆောင်ရေး function ကိုနှင့်မျက်နှာပြင်လူကုန်ကူးမှုများတွင် N-glycosylation ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J.Biol.Chem ။ 2004;279: 21012-21020 ။ [PubMed]
41 ။ Maldonado လေး, Kirstein CL ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကြိုတင်ကိုင်တွယ်တိုးပွားလာနေသည်။ Physiol.Behav ။ 2005;86: 568-572 ။ [PubMed]
42 ။ Mass LC, Tremblay RE ။ သူငယ်တန်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုစတင်ခြင်းအတွက်ယောက်ျားလေးများ၏အပြုအမူ။ Arch.Gen.Psychiatry ။ 1997;54: 62-68 ။ [PubMed]
43 ။ မေလ LJ, Kuhr WG ကို, Wightman RM ။ Vivo voltammetry အတွက်အစာရှောင်ခြင်း-စကင်နှင့်အတူကြွက် caudate နျူကလိယ၏ extracellular အရည်အတွက် dopamine လျတ်နှင့်လွှာမှဖြစ်စဉ်များ၏ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Neurochem ။ 1988;51: 1060-1069 ။ [PubMed]
44 ။ Meng SZ, Ozawa Y ကို, Itoh M က, Takashima အက်စ် Developmental နှင့်အသက်အရွယ်-related dopamine ပို့ဆောင်ရေးစသောအပြောင်းအလဲနှင့်လူ့ Basal ganglia အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;843: 136-144 ။ [PubMed]
45 ။ မိုက်ကယ်ဂျေယောသပ် JD, Kilpatrick MR, Travis ER, Wightman RM ။ အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry အတွက်ဒေတာဝယ်ယူတိုးတက်စေူခင်း။ Anal.Chem ။ 1999;71: 3941-3947 ။ [PubMed]
46 ။ Millar J ကို, Stamford ဂျာ Kruk ZL, Wightman RM ။ လြှပျစစျသည်ပျမ်းမျှ forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏လျှပ်စစ်ဆွအောက်ပါကြွက် caudate နျူကလိယအတွင်းလျင်မြန်စွာ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဖယ်ရှားရေး၏ pharmacological နှင့် electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1985;109: 341-348 ။ [PubMed]
47 ။ ဂူ DM, Lawler က CP, စာပို့သမား RB, Gilmore JH ။ လူ့ caudate နှင့် putamen အတွက် dopamine D-1 အဲဒီ receptor ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;21: 641-649 ။ [PubMed]
48 ။ Palacios JM, စခန်းများမှ M က, Cortes R ကို, လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Probst အေမြေပုံ dopamine receptors ။ J.Neural Transm ။ 1988 ပျော့ပျောင်း, 27: 227-235 ။ [PubMed]
49 ။ Patel ကအေပီ, Cerruti ကို C, Vaughan RA, Kuhar MJ ။ Developmental dopamine ပို့ဆောင်ရေး glycosylation စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်။ ဦးနှောက် Res ။ , Developmental ဦးနှောက်။ 1994: 53-58 ။ [PubMed]
50 ။ pause T က, Zijdenbos တစ်ဦးက, Worsley K သည်, Collins က DL, Blumenthal J ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL, အီဗန်, AC ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့: Vivo လေ့လာမှု၌။ သိပ္ပံ။ 1999;283: 1908-1911 ။ [PubMed]
51 ။ Paxinos, G, Watson ဟာ C. Stereotaxic Coordinates အတွက် Rat ဦးနှောက်။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1986 ။
52 ။ Pijnenburg AJJ, Honig WMM, ဗန် Rossum JM ။ အနိမ့်သည့် caudate နျူကလိယသို့ haloperidol ၏ဆေးများနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် apomorphine- နှင့် D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ကျပုံစံအပြုအမူ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ Psychopharmacologia ။ 1975;45: 65-71 ။
53 ။ Pijnenburg AJJ, Honig WMM, ဗန် Rossum JM ။ ၏တားစီး dhaloperidol ၏ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် -amphetamine-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုကြွက်၏နျူကလိယ accumbens သို့။ Psychopharmacologia ။ 1975;41: 87-95 ။ [PubMed]
54 ။ Robbins TW, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: မကောင်းတဲ့အလေ့အထတက်ထည့်ပါ။ သဘာဝ။ 1999;398: 567-570 ။ [PubMed]
55 ။ Robin ln, Przybeck TR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားရောဂါများအတွက်အချက်တစ်ချက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စတင်ခြင်း၏ခေတ်။ Nida Res Monogr ။ 1995;56: 178-192 ။ [PubMed]
56 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခု incentive- ာင်းအမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000;95 ပျော့ပျောင်း 2: S91-S117 ။ [PubMed]
57 ။ neuroscience အတွက် Seeman P. ပုံများ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, X ကို: ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း pruning ။ Am.J.Psychiatry ။ 1999;156: 168 ။ [PubMed]
58 ။ Seeman P ကို, Bzowej နယူးဟမ်းရှား, ဂွမ် HC, Bergeron ကို C, Becker က LE, Reynolds ကမိသားစုဆရာဝန်, Bird ကို ED, Riederer P ကို, Jellinger K ကိုက Watanabe အက်စ်လူ့ဦးနှောက် dopamine ကလေးငယ်များအတွက် receptors နှင့်အိုမင်းအရွယ်ရောက်။ synapses ။ 1987;1: 399-404 ။ [PubMed]
59 ။ ချွန်ထက် T က, Zetterstrom T က, Ljungberg T က, Ungerstedt U. တစ်ဦးကစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် intracerebral Dialysis ကို အသုံးပြု. ကြွက်များတွင်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1987;401: 322-330 ။ [PubMed]
60 ။ Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW ။ တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်။ သဘာဝတရား neuroscience ။ 1999;2: 859-861 ။ [PubMed]
61 ။ Spanagel R ကို, Weiss အက်ဖ်ဆုလာဘ်၏ dopamine အယူအဆ: အတိတ်နှင့်လက်ရှိအခြေအနေ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1999;22: 521-527 ။ [PubMed]
62 ။ လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
63 ။ လှံကို LP သို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြွက်များတွင်အုတ်ဂျေကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူ။ Behav.Neural Biol ။ 1979;26: 401-415 ။ [PubMed]
64 ။ Stamford ဂျေအေ။ အဆိုပါ Rat Nigrostriatal Dopamine စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အိုမင်းခြင်းဟာအစာရှောင်ခြင်းသိသိ Voltammetry နှင့်အတူလေ့လာခဲ့သည်။ J.Neurochem ။ 1989;52: 1582-1589 ။ [PubMed]
65 ။ Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် forebrain ဒေသများတွင် dopamine D4 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: D2 ကဲ့သို့ receptors နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res Dev.Brain Res ။ 1998;110: 227-233 ။ [PubMed]
66 ။ Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် cortical နှင့် striatolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: An autoradiographic လေ့လာမှု။ Dev.Neurosci ။ 1999;21: 43-49 ။ [PubMed]
67 ။ Teicher MH, Andersen က SL, Hostetter JC ။ Dopamine-receptor Striatum အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားသုတ်သင်သို့သော်မနျူကလိယ-Accumbens အဘို့သက်သေသာဓက။ Dev.Brain Res ။ 1995;89: 167-172 ။ [PubMed]
68 ။ Thompson ကလေး, Giedd ဖြစ်မှု, ဝုဒ် RP, Macdonald: D, အီဗန်, AC, Toga AW ။ စဉ်ဆက်စက်မှု tensor မြေပုံများအား အသုံးပြု. ရှာဖွေတွေ့ရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ထဲမှာကြီးထွားပုံစံများ။ သဘာဝ။ 2000;404: 190-193 ။ [PubMed]
69 ။ Vanderschuren LJ, Di Ciano P ကို, Everitt BJ ။ cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J.Neurosci ။ 2005;25: 8665-8670 ။ [PubMed]
70 ။ Vasilev V ကို, Veskov R ကို, Janac B, Rakic ​​L ကို, MK-801- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor နှင့်ကြွက်များ၏ကျပုံစံလှုပ်ရှားမှုများတွင် Stojiljkovic အမ်ခေတ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ Neurobiol.Aging ။ 2003;24: 715-723 ။ [PubMed]
71 ။ Walker က QD, မောရစ်က S, Caster JM, Nagel J ကို, Kuhn CM ။ မြီးကောင်ပေါက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးမှပုံကြီးချဲ့အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Soc.Neurosci.Abst ။ 2005: 1026.4 ။
72 ။ Walker က QD, Ray R ကို, Kuhn CM ။ ကြွက် striatum အတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေး neurochemical ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31: 1193-1202 ။ [PubMed]
73 ။ Walker က QD ရွန်နီကို MB, Wightman RM, Kuhn CM ။ အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှအထီးကြွက် striatum ထက်အမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ neuroscience ။ 2000;95: 1061-1070 ။ [PubMed]
74 ။ Wightman RM, Amatore ကို C, Engstrom RC, Hale က PD, Kristensen EW, Kuhr WG ကိုမေလ LJ ။ ကြွက် striatum အတွက် dopamine လျတ်နှင့်လွှာမှ၏ real-time စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience ။ 1988;25: 513-523 ။ [PubMed]
75 ။ Wightman RM, Zimmerman JB ။ Impulse Flow နဲ့စုပ်ယူသုံးစွဲမှုအားဖြင့် Rat Striatum အတွက် Dopamine Extracellular အာရုံစူးစိုက်မှု၏ထိန်းချုပ်ရေး။ ဦးနှောက် Res.Rev ။ 1990;15: 135-144 ။ [PubMed]
76 ။ Wills TA၊ Vaccaro D၊ McNamara G. Novelty သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူအဖြစ်ရှာဖွေခြင်း၊ စွန့်စားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆောက်လုပ်ခြင်းများ - Cloninger ၏သီအိုရီကိုအသုံးပြုသည်။ J.Substance အလွဲသုံးမှု။ 1994;6: 1-20 ။ [PubMed]
77 ။ ဝူမေး, Reith ME, Wightman RM, Kawagoe KT, Garry PA ဆိုပြီး။ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် Real-time voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာလျှပ်စစ် evoked dopamine ဒိုင်းနမစ်လွှာမှ parameters များကိုပြဌာန်းခွင့်။ J.Neurosci.Methods ။ 2001;112: 119-133 ။ [PubMed]
78 ။ Zuckerman အမ် Sensation-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ endogenous လိုငွေပြမှုသီအိုရီ။ NIDA.Res.Monogr ။ 1986;74: 59-70 ။ [PubMed]